को'ठा भि'त्र र'ङ्गे'हात भे'टिए स्मृ'ती र साजन, पे'टको ब''च्चा फा'लेको हो होइन ? भोजराजले खोजि खोजि यसरी भेटे (भिडियो हेर्नुहोस) - Public 24Khabar
Home News को’ठा भि’त्र र’ङ्गे’हात भे’टिए स्मृ’ती र साजन, पे’टको ब”च्चा फा’लेको हो होइन...
को’ठा भि’त्र र’ङ्गे’हात भे’टिए स्मृ’ती र साजन, पे’टको ब”च्चा फा’लेको हो होइन ? भोजराजले खोजि खोजि यसरी भेटे (भिडियो हेर्नुहोस)
एक समयकी चर्चित नेपाली नायिका शोविता सिंखडा अहिले सन्यासी भएकी छिन् । उनी ओशो तपोवनमा स्वामी आनन्द अरुणको सानिध्यमा ध्यान गर्छिन् । दुई बर्षदेखि चलेको यो सिलसिला चलचित्र क्षेत्रको चमक धमक भन्दा उनलाई प्रिय लाग्ने गरेको छ । उनी एकाएक कसरी बनिन् सन्यासी? यसको पनि एक रोचक कारण छ ।
केही समय अघि सोविताले फेसबुकमा स्वामी आनन्द अरुणलाई सम्बोधन गर्दै एक लामो स्टाटस लेखेकी थिइन् । उनी त्यहाँ लेख्छिन्, आदरणीय बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यू प्रणाम । थाहा छैन हजुरसँग पहिलो भेट कहाँ र कहिले भयो त्यो पहिलो भेटको स्मरण मसँग छैन तर यति भने पक्कै थाहा छ हजुरलाई भेट्दा म बालकै थिए ।
ओशो संन्यासीको घरमा जन्मदिन पाउनु नै मेरो अहोभाग्य होकि मैले मेरो चेतनाको विकासक्रममै सद्गरु ओशोको बारेमा बझ्ने, जान्ने र सुन्ने दुर्लभ अवसर पाएँ । अहिले पनि बालापनतर्फ फर्केर हेर्दा आफूलाई बडो भाग्यशाली महसुस हुन्छ ।
समयको रफ्तारमा अनवरत यात्रा गर्दागर्दै अहिले मेरो जीवनको मोड बदलिएको छ । बाहिरी सुखसयल, धनसम्पत्ती, नाम र भौतिक प्रगतिले मात्रै हाम्रो मानव चोलाले सार्थकता पाउँदैन आफूभित्रैको सुख, सुन्दरता र आनन्दलाई हेर्ने दृष्टि नखुलेसम्म बाहिरी सुख, सुन्दरता र आनन्दको स्वादको कुनै अर्थ रहेनछ । ती त सब क्षणभङ्गुर मात्रै हुन् पानीको थोपा जस्तै आउँछन् र बिलाएर जान्छन् भन्ने बोध ममा पनि हुन थालेको छ ।
Previous articleभर्खरै आयो ३ करोड नेपालीको र”गत उम्लिने खबर, बिदेस हेनेका १ को भारती SSB ले महाकालीमा बगाइदिए, थुक्क. (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleमलेसियामा विदेशी श्रमिकलाई शोषण गर्ने कम्पनीको अनुसन्धान गर्न माग (जानकारीका लागि सेयर गराै)